Kitra any Belzika: tafiditra «11 types de la saison» i Marco Ilahimaharitra | NewsMada
Kitra any Belzika: tafiditra «11 types de la saison» i Marco Ilahimaharitra
Mifarana ny taom-pilalaovana any Belzika, eo amin’ny taranja baolina kitra. Amin’ny fotoana hijanonan’ny fifaninanana toa izao, mamoaka ireo mpilalao 11 mendrika, tao anatin’izay fihaonana rehetra vita izay ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sport Foot Magazine. Fantatra àry fa tafiditra ao anaty “11 types de la saison”, ho an’ny “Jupiler Pro League”, ilay Malagasy, Ilahimaharitra Marco, milalao ao amin’ny Charleroi SC.
Tsiahivina fa anisan’ireo mpilalao andrin’ity klioba hilalaovany ity i Marco, ary izy no mitana ny toeran’ny irakiraka mpiaro. 25 taona Ilahimarahitra Marco, amin’izao fotoana izao ary sambany izao no nahavoafantina azy ho isan’ireo mpilalao mendrika ho an’ny fifaninanana any Belzika. Nahatratra 27 ny lalao vitany, ho an’ny taom-pilalaovana 2019 -2020 ka baolina 2 no matiny, tamin’izany.
Anisan’ireo mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar, ihany koa Ilahimaritra Marco, ary efa niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), notanterahina tatsy Egypta, ka nahatafita ny ekipam-pirenena malagasy, teo amin’ny dingana ampahefa-dalana. Nahafataran’ny rehetra an’Ilahimaharitra Marco, ilay “coup franc” matiny, nandritra ny fihaonana tamin’i Borondi, teo amin’ny andro faharoa, fifanintsanana ho an’ny sokajy “B”, tamin’iny Can 2019 iny. Ny baolina matin’i Marco, teo amin’ny minitra faha-76 no fandresena voalohany azon’ny Barea, ary nitokoany isa 3.
Tsiahivina fa mbola anisan’ireo mpilalao nantsoin’i Nicolas Dupuis, handrafitra indray ny Barea de Madagascar, Ilahimaharitra Marco, amin’ny fiatrehana ireo lalao fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2021) sy ny fifanintsanana ho an’ny (Mondial 2022).